भारतबाटै भयो यस्तो ड*रलाग्दो खु*लासा, र अ सँगको भेट र ओलीको पुरानो नक्शा ट्वीट बारे सनस*नीपूर्ण र*हस्य ! | Public 24Khabar
Home News भारतबाटै भयो यस्तो ड*रलाग्दो खु*लासा, र अ सँगको भेट र ओलीको पुरानो...
भारतबाटै भयो यस्तो ड*रलाग्दो खु*लासा, र अ सँगको भेट र ओलीको पुरानो नक्शा ट्वीट बारे सनस*नीपूर्ण र*हस्य !
रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सञ्चालन गरेको बुटवल सोलार पावर प्रोजेक्टले विद्युत उत्पादन सुरू गरेको छ । वैशाख महिनामै बिजुली उत्पादन सुरू गर्ने लक्ष्य राखेको यो आयोजना चैत महिनादेखि नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारीकै कारण पछाडि धकेलिएको थियो।
को’रोना महामारीकै बीचमा भए पनि सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी आयोजनाले असोज २७ गतेदेखि बिजुली उत्पादन सुरू गरेको हो। यो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली ब्याट्रीमा निर्भर नभई प्रत्येक पाताबाट उत्पादित विद्युत् सिधै ग्रिडमा लगेर जोडिएको छ । अहिले यहाँबाट उत्पादित साढे ८ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा लगेर जोडिएको रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक कुवेरमणि नेपालले जानकारी दिए।
रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले २०७६ साल कात्तिकदेखि बुटवल सोलार ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्टको नामबाट काम अगाडि बढाएको थियो। यो सोलार पावरबाट उत्पादित विद्युत् सिधै ग्रिडमा लगेर जोडिने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलार पावर प्रोजेक्ट हो। तिलोत्तमा नगर पालिका वडा नम्बर ६ गोरकट्टामा शान्ति नमूना माविको २६ बिगाहा जग्गा लिजमा लिएर आयोजनाको प्यानल, ट्रान्सफर्मर, इन्भर्टर जडान गरिएको छ।
यहाँ उत्पादित बिजुली अमुवामा रहेको सबस्टेशनमा जोडिएको छ। परियोजना प्रवन्धक एवम् ईलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियर यतु रावतले प्यानल जडान गरिएको स्थानदेखि साढे सात किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन मार्फत सबस्टेशन लगेर बिजुली जोडिएको बताए । गुल्मीको रिडी हाइड्रोपावरको मातहतमा निर्माण गरिएको यो प्रोजेक्टले मणिग्राममा लिजमा लिएको जग्गामा ३२ हजार सोलार पाता जडान गरिएको छ।
जडान गरिएका प्रत्येक पाता तीन सय ३० वाट क्षमताका रहेका छन्। उक्त प्राजेक्टको प्रारम्भिक लागत ६५ करोड अनुमान गरिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म कुल लागत ७० करोड पुगेको छ । ब्याट्री नराखी ग्रीड कनेक्टेड भएकोले घाम लागेको समयमा मात्र सोलार विद्युत् उत्पादन गर्नेछ। यसरी हेर्दा दैनिक ९-१० घण्टा विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले प्राधिकरणसँग २५ वर्षका लागि प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३पैसामा विद्युत बिक्री सम्झौता गरेको छ।ग्रीड कनेक्टेड प्रोजेक्ट भएको कारण व्याट्रि मर्मतमा झण्झट नहुने र प्राविधिक टिमले नियमित रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्न सके वर्षौंवर्ष उत्पादन लिन सकिने रावतले बताए। बिजुली उत्पादन सुरू भएपछि सुख्खायाममा खोलामा पानी नभएको बेला रिडी हाइड्रोपावरबाट हुने विद्युत उत्पादनको कमिलाई पूरा गर्न सकिने परियोजनाको लक्ष्य छ।
Previous articleक्यानडेली प्रधानमन्त्री ट्रुडेद्धारा विजया दशमीको शुभकामना
Next articleतास खेल्दा जित्ने यस्तो रह*स्यमय ट्रिक सबैलाई यसरी उल्लु बनाउदा रहेछन्